RealArt Dance Studio 60000 Coupon
၁၅-၀၂-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၀၃-၂၀၁၈ ထိ
ဤဆုအား GCMoney(10000) ဖြင့် ကံစမ်းပါ။
RealArt Entertaindance ၏ လိပ်စာ
Address: No-13, 1st Floor, Mahar Bawga St.,Baho Road, (3) WARD, Yangon.
Phone: 09 44448 7889
Facebook Page : https://www.facebook.com/realartdancestudio447/
RealArt Entertaindance ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ RealArt Entertaindance မှ ဖြစ်ပါတယ်။
ကံထူးရှင် (၁) ယောက်အတွက် (၆၀,၀၀၀)ကျပ်တန် အကသင်တန်း အခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့် coupon အားမဲဖောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ RealArt Entertaindance တွင် အခြေခံမရှိသော အက ဝါသနာရှင်များအတွက်လည်း အခြေခံမှစ၍ သင်ကြားပေးနေပါပြီ။ ပါဝင်ကံစမ်းပေးသည့်အတွက် အားလုံးကို RealArt Entertaindance မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
RealArt Dance Studio's Activities
RealArt Entertaindance Class Room Activities
November လအတွက် တန်းခွဲသစ်များ
November လအတွက် ⏪
🆕 အကသင်တန်း တန်းခွဲသစ်များ စတင်နေပါပြီ 🆕
အကသင်တန်း အချိန်ဇယား , သင်တန်းကြေးနဲ့ သင်တန်း ကို လာရောက်ဖို့အတွက် မြေပုံလေးပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်....
✔ Easy Basic Dance Class For Beginner ✔
Street Dance Foundation for Stage Performer အကအခြေခံမရှိသေး အကနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာမှ မသိသေးသူများအတွက် စလုံးရေစ ပထမဦး ဆုံးတတင်တက်ရောက်သင့်သော အကသင်တန်း အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်... November တန်းခွဲသစ်များ
သင်တန်းကြေး - 42000 Ks (30 % Save in 60000 Ks)
သင်တန်းအပတ်စဉ် - B_028
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ - Nov 11
သင်ကြားမည့်နေ့များ - Sat/Sun
သင်ကြားမည့် အချိန် - 10:00 Am to 11:30 Am
သင်ကြားချိန်စုစုပေါင်း - 18 Hours in 12 Classes
သင်တန်းအပတ်စဉ် - B_029
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ - Nov 15
သင်ကြားမည့်နေ့များ - Mon/Wed/Fri
သင်ကြားမည့် အချိန် - 3:00 Pm to 4:30 Pm
သင်တန်းအပတ်စဉ် - B_030
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ - Nov 20
သင်ကြားမည့် အချိန် - 1:30 m to 2:30 Pm
သင်တန်းအပတ်စဉ် - B_031
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ - Nov 21
သင်ကြားမည့်နေ့များ - Tue/Thu
သင်ကြားမည့် အချိန် - 11:30 Am to 1:00 Pm
သင်တန်းအပတ်စဉ် - B_032
သင်ကြားမည့် အချိန် - 6:30 Pm to 8:00 Pm
**ရုံးတက်နေသူများအတွက် သီးသန့် ( ရုံးချိန်ပြင်ပသင်တန်း )**
✔ Dance Fitness Class ✔
ကျန်းမာရေးလိုက်စားလိုသူ ကိုယ်ကာယလေကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်လိုသူများအတွက် ကျန်းမားသွက်လက်ပျော်ရွှင်၍ စိတ် Relax ဖြစ်စေကာ အဆီပိုများလျော့ကျ သွားစေမည့် အပျော်တမ်း ကတတ်လိုသူများ အသင့်လျော်ဆုံးသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်....
*** သင်တန်းကြေး ***
တစ်လ အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နေ့ရက်များကို
10 Days Package ဖြင့် တက်ရောက်ပါက 30000 Ks
တစ်လခွဲ အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နေ့ရက်များကို
20 Days Package ဖြင့် တက်ရောက်ပါက 40000 Ks
နှစ်လ အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နေ့ရက်များကို
30 Days Package ဖြင့် တက်ရောက်ပါက 50000 Ks
သင်ကြားမည့်နေ့ရက်များ - Mon/Wed/Fri
သင်ကြားမည့်အချိန် - 8:00Am to 9:30Am
သင်ကြားမည့်နေ့ရက်များ - Tue/Thu/Sat/Sun
သင်ကြားမည့်အချိန် - 6:30Pm to 8:00 Pm
➡ မည်သည့်နေရက်မဆို စတင် တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်
✔ B Boy / B Girl Beginner Class ✔
အခြေခံရှိပြီးသူ / အခြေခံ မရှိသေးသူ B Boy Dance ကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသူ အက ဝါသနာရှင်များ အတွက် အခြေခံ ကနေ အသေးစိပ် သင်ကြားပေးမယ့် သင်တန်း ဖြစ်ပြီး B Boy Dancer တစ်ဦး အဖြစ် ရပ်တည်သွားနိုင်သည် အထိ သင်ကြားပေးမယ့် သင်တန်း ဖြစ်ပါတယ်...
သင်တန်းကြေး - 30000Ks (40 % Save in 50000 Ks)
သင်တန်းအပတ်စဉ်. - Y _ 003
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့. - Nov 11
သင်ကြားမည့်နေ့ရက်များ - Sat/ Sun
သင်ကြားမည့်အချိန် - 9:00Am to 10:00 Am
သင်ကြားချိန်စုစုပေါင်း - 12 Hours in 12 Classes
သင်တန်းအပတ်စဉ်. - Y _ 004
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့. - Nov 20
သင်ကြားမည့်အချိန် - 4:30Pm to 5:30 Pm
✔ Shuffle Dance Beginner Class ✔
Shuffle Dance ကို စိတ်ဝင်စားသူများ၊ Shuffle ကို လေ့လာနေဆဲ သူများ အတွက်...
Club , Partyပွဲများ, Bar ,EDM ပွဲတွေမှာ အထာကျကျနဲ့အမိုက်စား Rave ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် စည်းစနစ်ကျနစွာနှင့် အခြေခံမှ တဆင့်ချင်းစီ သင်ကြားပေးမှာပါ။
သင်တန်းကြေး - 40000 Ks (20% Save in 50000 Ks)
သင်တန်းအပတ်စဉ်. - S_ 001
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့. - Nov 6
သင်ကြားမည့်အချိန် - 4:30Pm to 6:00 Pm
သင်တန်းအပတ်စဉ် - S_002
နောက်ထပ်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် သင်တန်းနေ့ရက်နှင့် အချိန်အပိုင်းအခြားများကို
Mon/Wed/Fri (Morning Class OR Evening Class)
Tue/ Thus. (Morning Class OR Evening Class)
Sat/ Sun. (Morning Class OR Evening Class)
အဖြစ် ခွဲခြားပြီး လစဉ်လတိုင်း တန်းခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိပါတယ်...
မိမိသင်တန်းတက်လို့ သည့် အချိန်အပိုင်းအခြား
များကို ရေးသား၍ 09444487889 ကိုဆက်သွယ်ပြီး* ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းထားနိုင်ပါတယ်*
လူဦးရေ အကန့်အသက် ရှိပါသည်
Hot Line No. *** 09444487889***
RealArt Entertaindance FB Chat Box မှာ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်...
အမှတ် ၁၃၊ ပထမထပ်၊ မဟာဘောဂလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်(လှည်းတန်း)၊ ရန်ကုန်။ လှည်းတန်းလမ်း(ကျောင်းရှေ့မှတ်တိုင်အနီး)
YBS - 14/ 30/ 38/ 41.
YBS - 11/ 22.
Easy Basic Dance Class for Beginner
(Street Dance Foundation for Stage Performer)
အကကို ဝါသနာပါ၍ Zero အဆင့် ယခုမှစတင်လေ့လာနေဆဲ လေ့လာနေချင်သူများ၊
အကနဲ့ပက်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံလုံးဝ(လုံးဝ) မရှိသေးသူများ
ဝါသနာပါပြီးမည်သို့မည်ပုံ က ရမည်ကို မသိသေးသူများ၊
Party ပွဲများ ကျောင်းပွဲများ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ Cover Dance ဝါသနာပါသူ က လို သူများအတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မည့် စနစ်ကျနမှန်ကန်သည့် အကသင်ယူမှုနည်းစနစ်များ အပြင်...
အခြေခံမရှိသေးသူများအတွက် Street Dance Categories များစွာရဲ့ အခြေခံအကျဆုံးသော ကကွက်များဖြင့် သင်ယူရလွယ်ကူသော အကများရဲ့ Foundation တွေကို
အကအတွေ့အကြုံ ၈ နှစ်ကျော်မျှ ရှိသော ဆရာများကိုယ်တိုင် Update အဖြစ်ဆုံးသော Music များဖြင့် အသေးစိပ် စည်းစနစ်ကျနစွာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် အမှန်တကယ်တတ်မြောက်သည်အထိ စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်...
K Pop Dance တွေကို စိတ်ဝင်စား၍ ဝါသနာပါသူများ...
Hip Hop Dance တွေကို စိတ်ဝင်စား၍ ဝါသနာပါသူများ...
Street Dance တွေကို စိတ်ဝင်စား၍ ဝါသနာပါသူများ...
မည်သည့်အကကို မဆို ဝါသနာပါလေ့လာလိုသူများ...
အခြေခံမရှိသေးသူများအတွက် ဘာတွေကို အရင်စပြီးလေ့လာရမလဲ ဘယ်လို စပြီး က ရမလဲ?ဆိုတာ...မသိသူများအတွက်...
Body Movement တွေရဲ့ အနေအထား...
Emotion ဖြစ်တဲ့ Performance တစ်ခုမှာ ဖျော်ဖြေနေတဲ့ အချိန် မိမိရဲ့ စိတ်ခံစားချက် ကြောက်ရွံမှု စိုးရိမ်မှု တွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ပြီး အကနဲ့သီချင်းတွေအပေါ် ခံစားသက်ဝင်၍ Performance တစ်ခု အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပုံ ... အစရှိတာတွေရဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို စာတွေ့လက်တွေ့ အနေနဲ့ အကလဲ သင်ရင်း Knowledge တွေလဲရမယ့် အကသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
အခု Classလေးမှာ Sharing ပြုလုပ်သွားမယ့် Trainer မှာလဲ အကသက်တမ်း နှင့် ပွဲပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည့် Jade Dragon အကအဖွဲ့မှ Member ဟောင်း ဖြစ်ပြီး MEBC MusicArt Academy မှ Founder ဖြစ်သည့် Sir.Eain Min Htet ၏ တပည့်အရင်း...
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Singer / Music Artist & Director ဖြစ်တဲ့ Prof.Sigune von Osten ၏ တပည့်...
Dance Trainer Yail Yan Naung မှ
ဆရာအရင်းများ၏ သင်ကြားရေး Technic များနှင့်အတူ ပွဲအတွေ့အကြုံများပေါင်းစပ်ကာ သင်ကြားသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...
Musicality (Listening Skill)
Body Movement( Training & Practicing Skill)
Emotion (Dancing & Feeling Skill)
စသည် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် အကြောင်းအရာ3မျိုး ၏အခြေခံသဘောတရားများကို သင်ကြားပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်...
Choreography by Yail Yan Naung(JD Family)
သင်တန်းကြေး-42000ks(30 % Save in 60000ks)
B Boy/ B Girl Dance Class
B Boy / B Girl Dance များကိုမှ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ဆိုတဲ့ အကဝါသနာရှင် ညီငယ်ညီမငယ်များအတွက် အသက်သာဆုံးသင်တန်းကြေးနှုန်းထားများဖြင့်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်...
B Boy Dance Class
Beginner Class - 1 Month - 30000 Ks
Foundation Class - 1 Month - 40000 Ks
B Boy/ B Girl Beginner Class
B Boy Dance များကို အခြေခံကနေ စတင်သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အကအခြေခံမရှိသေးသူများပါ တက်ရောက်နိုင်မည့် သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်...
တစ်လလျှင် သင်ကြားချိန် 12 ချိန်အသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး...
Beginner Class (12 Classes in 1 Month)
Foundation Class (12 Classes in 1 Month)
Open Class များအဖြစ် Class3မျိုး ခွဲပြီး လစဉ်တက်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်....
အမှန်တကယ်တက်မြောက်သည်အထိ အချိန်ပေးတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အချိန်ကုန်ရကျိုး ပိုက်ဆံကုန်ရကျိုးနပ်စေမည့် သင်တန်းတစ်ခုအဖြစ် အာမခံနှင့်သင်ကြားပေးသွားမှာပါ...
တစ်လအတွင်း အပြီးတက်မြောက်သွားခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ
B Boy Foundation Class / B Boy Open Class များကို တက်ရောက်သွားမည်ဆိုပါက Professional B Boy / B Girl များအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်သည် အထိ သင်ကြားပြသပေးသွားမှာပါ...
သင်ကြားပြသပေးမည့် Trainer အနေနဲ့လဲ... ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံ အကသက်တမ်း အတွေ့အကြုံများစွာ ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာလဲ B Boy / B Girl ဝါသနာရှင်ညီငယ် ညီမငယ်များကို သင်ကြားပြသပေးနေသူတစ်ဦးလဲ ဖြစ်သည့် အပြင် Myanmar B Boy Association (MBA) ရဲ့ Leader တစ်ဦးလဲ ဖြစ်တဲ့ Trainer ကတော့ B Boy Spiderz ပါ....
B Boy Spiderz ရဲ့ ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံလေးကိုလဲ အောက်က Video လေးမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်...
သင်တန်းကြေး - 30000 Ks (40% Save in 50000 Ks)
သင်တန်းအပတ်စဉ် - Y_003
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ရက် - 20 November 2017
သင်ကြားမည့်နေ့. - Mon / Wed / Fri
သင်ကြားမည့်အချိန် - 4:30 PM - 5:30 PM
စုစုပေါင်း သင်တန်းချိန် - 12 Classes
သင်တန်းအပတ်စဉ် - Y_004
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ရက် - 25 November 2017
သင်ကြားမည့်နေ့. - Sat/Sun
သင်ကြားမည့်အချိန် - 8:00 AM - 9:00 AM
အခြား သင်တန်းချိန်များ တက်ရောက်လိုပါက သင်တန်းဆရာများနှင့် ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
Shuffle Dance Beginner Class
- အက ကို ဝါသနာပါ၍ Shuffle Dance ကို စိတ်ဝင်စားသူများ၊ Shuffle ကို လေ့လာနေဆဲ သူများ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်...
- Club , Partyပွဲများ, Bar ,EDM ပွဲတွေမှာ အထာကျကျနဲ့အမိုက်စား Rave ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် စည်းစနစ်ကျနစွာနှင့် အခြေခံမှ တဆင့်ချင်းစီ သင်ကြားပေးမှာပါ...
- Beginner Class အခြေခံ Foundation များကို တစ်လ တက်ရောက်ပြီးပါက Open Class မှာ ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...
သင်တန်းကြေး - 40000 Ks (20% Save in 50000Ks)
သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ - Nov 11, 2017.
သင်တန်းအပတ်စဉ် - S_002
သင်တန်းမည့်အချိန် - 11:30AM to 1:00PM
သင်တန်းချိန်းစုစုပေါင်း - 12 ချိန်
သင်တန်းချိန်ကာလ 12 ရက်အတွင်းမှာ Shuffle Dance ကို အသေးစိတ် Basic ကနေစပြီး အမိုက်စားကနိုင်တဲ့အထိ တာဝန်ယူသင်ကြားပေးမယ့် Trainer အနေဖြင့်...
အကသက်တမ်း အတွေ့အကြုံ7နှစ်ခန့်ရှိပြီး ပြိုင်ပွဲများမှာဆုရရှိခဲ့ရုံသာမက Japan နှင့် Thailand နိုင်ငံတွေမှာ အကပညာကို လေ့လာခဲ့တဲ့ အတွေ့ကြုံပေါင်းများစွာ နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ Sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်.....
FG-Crew ရဲ့ Leader 👉 Mr.Hii (All-Style) ဖြစ်ပါတယ်...
RealArt Dance Studio FB Chat Box မှာ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်...